Weydii Cawaltigga: Maxay tahay Habka ugu Hooseeya ee Aad u Hesho Spam Referral
Ka dib marka la rakibo Google Analytics, haddii aad aragto in gaadiidkaagu uu kor u kacay, waa calaamad in website-kaaga uu helo aragti been abuur ah oo aad qaadato tallaabooyin si aad uga takhalustid sida ugu dhaqsaha badan.
Artem Abgarian, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee 10 Semt , wuxuu ka digay in nasiib daro, ma jirto habka loogu tala galay in laga tirtiro spam ee Google Analytics si joogto ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad yareyn kartaa khatarta adoo qaadanaya siyaabo badan
Spam gaashaan iyo isticmaalkooda
Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee aynu u helno gudbinta spam waa boodada spam. Khasaarayaashu waxay naqshadeeyeen siyaabo badan waxayna iskudayeen in ay ku lug yeeshaan tiro badan oo dad ah in ay jabiyaan boggooda internetka. Waxay u diraan isku-xirnaanta isku-xirka sanduuqaaga oo aad iska dhigo in ay abuuri karaan gaadiid badan. Markaad gujiso xiriiradaas, waxaad arki doontaa in boggaaga uu helayo gaadiid badan, laakiin gaadiidku ma laha wax run ah. Khasiirada dhabta ah waxay dhab ahaantii isticmaalaan dhufaysyada spam si ay kuugu khiyaaneeyaan.
Noocyada Spam Referral
Goobaha spam waxay isticmaalaan siyaabo kala duwan oo loo abuuro spam gudbinta: iyada oo loo marayo gudbinta galka iyo gudbinta cirbadaha. Google Analytics ma qiimeyn karo ama garsoorka oo ah u gudbin loogu talagalay iyo waxa loo yaqaan referral spain. Diritaanka gawaarida waxay muuqdaan marka Google Analytics uu ku dhaco gaadiidka been-abuurka ah ama aan la aqoon, halka qayba-dhejinta ay dhacdo marka goobtaadu hesho tiro badan oo ra'yiga ah ilaha aan la aqoon. Waxaad u baahan tahay inaad ka saarto bots sababtoo ah waa inaad hoos u dhigtaa culeyska serverada iyo bogaggaaga. Sidoo kale waa muhiim inaad hesho macluumaad sax ah Google Analytics ee caafimaadkaaga boggaaga..
Domain Referral Domains
Ma aha khalad in la yiraahdo waxaa jira xayeysiisyo badan oo spam laakiin kuwa caanka ah waa darodar.com, ilovevitaly.com, semalt.com, iyo buttons-for-website.com. Waa muhiim inaad ka fogaato bogagga internetka iyo goobaha kale ee la midka ah sababta oo ah waxay dhaawici karaan goobtaada waxayna burburin karaan Google AdSense.
Ka saarida Xeeladaha Dhaqanka ah iyo Xakamaynta
Waxaad ka saari kartaa caarada iyo cidhibta wanaagsan ee laga helay xogtaada adiga oo hagaajinaya goobahaaga. Haddii aadan joojin ama ka saarin sida ugu dhaqsaha badan, waxaa jira fursado ah in boggagaaga uu waxyeelo heli doono. Inta badan baakadaha iyo caarada waxay u egyihiin bogga-saaxiibtinimo, laakiin waxay dhab ahaantii waxyeeleeyaan macluumaadkaaga internet-ka iyo xawaaladahaaga. Google Analytics wuxuu bixiyaa heshiisyo kala duwan, talooyin, xirfado, iyo talooyin si aad uga saarto boggaaga. Waxaad aadi kartaa qaybta maamulka si aad u eegto cusboonaysiinta cusub oo aad u hagaajisid goobahaaga.
Sida looga saaro soo gudbinta Ghost?
Ka dib markii la tijaabiyo qaar ka mid ah heshiisyada, waxaan ogaaday in ay fududahay in la xakameeyo gudbinta galka adigoo rakibaya iyo dhaqdhaqaajinta filtarradaada. Hubi inaad isticmaasho shaandhooyin kala duwan si aad u sarayso ilaalintaada internetka. Waa inaad sidoo kale sameysataa fureerka martida ee saxda ah. Taas awgeed, waa inaad ku dhejisaa aqoonsigaaga ama lambarkaaga. Halkaan halkan iigu sheego in xarkaha ay yihiin kuwo xariif ah; ma ayan fursad u helin inay baxaan marka goobtaada ama Google Analytics uusan waxyeeleynin
Ka qaado Spam Referral Spam
Marka aad hagaajisid goobaha kor ku xusan, tallaabada xigta waa in la hirgeliyo falanqeyn marti ah oo ansax ah kaas oo hayn doona boggaaga iyo Google Analytics oo ka badbaado spam gudbinta. Waa inaadan hilmaamin in gorgortanku uu booqdo goobtaada hadda ka dibna isku day inaad dhaawacdo macluumaadkaaga. Taasi waa sababta aad uga saari lahayd labadaba goobtaada iyo Analytics marka ugu horreysa Source .